China boaty paty miody sy fanamboarana | JAHOO
Taratasy fanary dia esorina ny boaty paty miaraka amina Model Dimensions (cm) fonosana ambony ambany Pcs / kitapo kitapom-batsy / Pcs / ctn 16oz 8.1 × 7.3 7.7 9.8 50 10 500 26oz 9.8 × 8.5 9.5 9.3 50 10 500 32oz 10.2 × 8.9 9.5 11.5 50 10 500 Model Dimensions (cm) fonosana ambony ambany ...
Taratasy fanary manala boaty paty misy tahony
MODELY Refy (cm) Package
Top ambany avo Pcs / bag Bags / ctn Pcs / ctn
16oz 8.1 × 7.3 7.7 9.8 50 10 500
26oz 9.8 × 8.5 9.5 9.3 50 10 500
32oz 10.2 × 8.9 9.5 11.5 50 10 500
8oz 7.2 × 5.7 6.1 × 4.6 6.3 50 10 500
16oz 9.3 × 7.6 7.5 × 5.8 7.6 50 10 500
26oz 10.5 × 9.3 8 × 6.9 10.4 50 10 500
32oz 11.5 × 9.8 9 × 7.1 10.1 50 10 500
Ny sakafo be dia be dia mitaky fonosana matanjaka sy mahazaka menaka izay tsy mivoaka na mamiravira.
Ny boatin-tsakay dia nandalo ny fitsapana rehefa nanolotra sakafo be dia be nankafizin'ny fianakaviana piknik ny mpandraharaha,fety birao na amin'ny sakafo hariva an-trano.
Maka sy mandeha sakafo mamela ny mpanjifa hisafidy sakafo mahazatra nefa tsy miandry ny fiomanana.
Ny boaty sakafo haingana dia fitoeram-bokatra mivelatra miaraka amina baravarana malalaka izay manome fahitana ampy mora foana ary fantaro haingana ny sakafo isan-karazany.
Ity lalam-pamokarana ity dia vahaolana entam-barotra lehibe ho an'ny toerana ahafahan'ny mpanjifa mandeha.
Reharehantsika amin'ny fifampidinihana amin'ireo mpanjifantsika amin'ny famerenany ny takiana amin'ny fonosana ankapobeny ary manolotra fanatsarana izay hampihena ny vidin'ny fonosana ankapobeny.
Tsy mitsahatra mandinika foto-kevitra fonosana vaovao sy vaovao miaraka amin'ireo mpanjifantsika izahay hamaritana inona no fomba lafo indrindra sy mahomby indrindra amin'ny famonosana ny vokatr'izy ireo.
Manomboka amin'ny taratasy fisakafoanana mahazaka menaka mankany amin'ny kitapo sy fonosana azo soratana, ny vahaolana namboarinay manokana dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fonosana sakafo tsy manam-paharoa.
Manolotra karazana endri-javatra misy izahay, ao anatin'izany ny fanoherana ny rano, ny fanoherana ny menaka, kalitaon'ny lafaoro, ary tanjaka matanjaka be.
Inona no fanompoana Fonosana Jahoo manome?
1.Samples omena maimaimpoana ho an'ny vokatra fonosin-taratasy.
2.Lead time haingana, orinasa 10000 metatra toradroa, milina famokarana 50 hahazoana antoka fa haingana ny fandefasana anao.
3.Manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasam-pandefasana maro izahay ary lehibe ny volan'ny fanondranana anay. Ireo orinasan-tsambo dia afaka manome fihenam-bidy tsara ho anay.
4.Matihanina teknisiana manohana. Manana ekipa serivisy aorian'ny varotra izahay. Afaka mamaha ny olanao ara-potoana izy ireo.
5.Ny entana rehetra dia hojerena sy hosedraina alohan'ny fandefasana.
6. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia zava-dehibe indrindra aminay, raha manana olana na fanontaniana momba ny fifanakalozana izahay, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny Trademanager na mailaka. Hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
Manaraka: kitapo taratasy
Sakafo Kraft Paper Chinese Noodle boaty azo ampiasaina ...